Tafura Slides Vagadziri & Vatengesi - China Tafura Yemasiraidhi Factory
35mm otomatiki Kusimudza Extension Kudya Tafura Slide
Yedu 35mm otomatiki Kusimudza Extension Kudya Tafura Slide yakaitwa neakakwira chaiyo muchina. Tine hupamhi 35mm uye 48mm maviri akasiyana marudzi ematafura ekuwedzera masiraidhi. Isu tinogona kugadzirisa tafura yekuwedzera vamhanyi petafura yako maererano nemagadzirirwo etafura yako. Kana iwe uchifarira edu ekuwedzera tafura masiraidhi, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
35mm Mbiri nzira yekuwedzera dinning tafura inotsvedza pasina kuwiriranisa
Nhanganyaya:Yedu 35mm Mbiri nzira yekuwedzera dinning tafura inotsvedza pasina kuwiriranisa kunoitwa nemhando yepamusoro muchina. Tine hupamhi 35mm uye 48mm maviri akasiyana marudzi ematafura ekuwedzera masiraidhi. Isu tinogona kugadzirisa tafura yekuwedzera vamhanyi petafura yako maererano nemagadzirirwo etafura yako. Kana iwe uchifarira edu ekuwedzera tafura masiraidhi, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
35mm Kaviri yekuwedzera yekuenzanisira dinning tafura inotsvedza nekiyi
Nhanganyaya:Yedu 35mm Yechipiri yekuwedzera yekuenzanisira dinning tafura inotsvedza pamwe nekiyi yakaitwa neakakwira chaiyo muchina Tine hupamhi 35mm uye 48mm maviri akasiyana marudzi ematafura ekuwedzera masiraidhi. Isu tinogona kugadzirisa tafura yekuwedzera vamhanyi petafura yako maererano nemagadzirirwo etafura yako. Kana iwe uchifarira edu ekuwedzera tafura masiraidhi, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
35mm Kumuka & Kudonha telescopic tafura yekuwedzera slide
Nhanganyaya:Yedu 35mm Kumuka & Kudonha telescopic tafura yekuwedzera slide yakaitwa neakakwira chaiyo muchina. Tine hupamhi 35mm uye 48mm maviri akasiyana marudzi ematafura ekuwedzera masiraidhi. Isu tinogona kugadzirisa tafura yekuwedzera vamhanyi petafura yako maererano nemagadzirirwo etafura yako. Kana iwe uchifarira edu ekuwedzera tafura masiraidhi, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Upamhi 48mm telescopic chiteshi slide yemaviri tafura yekuwedzera dinning
Nhanganyaya:Yedu Upamhi 48mm telescopic chiteshi inotsvedza kwemaviri matafura edinning matafura akagadzirwa nemhando yepamusoro muchina. Tine hupamhi 35mm uye 48mm maviri akasiyana marudzi ematafura ekuwedzera masiraidhi. Isu tinogona kugadzirisa tafura yekuwedzera vamhanyi petafura yako maererano nemagadzirirwo etafura yako. Kana iwe uchifarira edu ekuwedzera tafura masiraidhi, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
48mm Imwe nzira nzira tafura yekuwedzera
48mm telescopic bhora rinotakura tafura yekuwedzera slide
Nhanganyaya:Yedu 48mm telescopic bhora rinotakura tafura yekuwedzera slide yakaitwa neakakwira chaiyo muchina. Tine hupamhi 35mm uye 48mm maviri akasiyana marudzi ematafura ekuwedzera masiraidhi. Isu tinogona kugadzirisa tafura yekuwedzera vamhanyi petafura yako maererano nemagadzirirwo etafura yako. Kana iwe uchifarira edu ekuwedzera tafura masiraidhi, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
YA-4804 Double-deck telescopic chiteshi tafura yekuwedzera slide
Nhanganyaya:Yedu YA-4804 Yakapetwa-tafura telescopic chiteshi tafura yekuwedzera slide yakaitwa neakakwira chaiyo muchina Tine hupamhi 35mm uye 48mm maviri akasiyana marudzi ematafura ekuwedzera masiraidhi. Isu tinogona kugadzirisa tafura yekuwedzera vamhanyi petafura yako maererano nemagadzirirwo etafura yako. Kana iwe uchifarira edu ekuwedzera tafura masiraidhi, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Multi Chikamu Kupeta Tafura Slide (yekuwedzera tafura mashini)
Nhanganyaya:Yedu Multi Chikamu Kupeta Tafura Slide (yekuwedzera tafura mashini) yakagadzirwa neakakwira chaiyo muchina. Tine hupamhi 35mm uye 48mm maviri akasiyana marudzi ematafura ekuwedzera masiraidhi. Isu tinogona kugadzirisa tafura yekuwedzera vamhanyi petafura yako maererano nemagadzirirwo etafura yako. Kana iwe uchifarira edu ekuwedzera tafura masiraidhi, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.